Ahoana ny fomba hanaovana seza birao (Seza Shell Eames) - Ikkaro
firosoana >> Ahoana no hanaovana azy >> Ahoana ny fomba hanaovana seza birao
Tsara ahoana no anaovana azy, efa ela izahay no tsy nandefa na iray aza.
Tsy misy feo fa hitanao daholo seha-pamokarana seza mazava tsara. Amin'ity tranga ity dia seza fiberglass izy io. Ny maodely dia Seza Eames Shell
Seza Shell Eames
Fomba fanaovana seza
Manomboka amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny endrik'ilay seza sy ny backrest mba hahatonga azy io ho ergonomic. Izy ireo dia mandray refy, manitsy ary mandeha amin'ny drafitra hahazoana ny refy ilaina ary manana endrika hamerina izany. Efa antitra ilay video. Androany dia manao fandalinana sy fitsapana marobe amin'ny ergonomika izy ireo.
Volavola voalohany na
Ny sosona tanimanga iray dia ampiana amin'ny rafitra efa azon'izy ireo ary avy eo ampidirina ireo lamina nalaina tamin'ny famolavolana, ary amin'ny alàlan'ny fitaovana voamarina dia esory ireo fitaovana tanimanga tafahoatra ary avelao ny maodelin'ny endriny.
Ity dia dingana iray tena miasa mafy, miara-miasa amin'ny tanimanga tandroky ny refy tonga lafatra.
Rehefa vita dia rakotra polymer izy ary azontsika ny bobongolo izay hampiasaina hamokarana seza rojo fiberglass. azontsika atao ny mahita ny seza be dia be azo amin'ny fiberglass.
Azafady, raha miasa amin'ny fiberglass ianao, dia tandremo ny fepetra ilaina.
Tsy manana fanazavana vitsivitsy momba ny vokatra ampiasainao isaky ny inona aho. Raha polymère izy ireo, ny resins ary ny karazany. Azo antoka fa azo hadihadiana bebe kokoa izy io
Ahoana ny fomba hanaovana saribakoly saribakoly
Fomba fanamboarana fehikibo avy amin'ny sprockets sy fonosana kodiarana